भुवन केसी लेख्छन्–‘संवैधानिक संकट टर्यो तर नेतृत्वमाथिको आशंका टरेको छैन’ रे??? – News Nepali Dainik
भुवन केसी लेख्छन्–‘संवैधानिक संकट टर्यो तर नेतृत्वमाथिको आशंका टरेको छैन’ रे???
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १२, २०७७ समय: १५:३७:०२
काठमाडौं । मंगलबार साँझ सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना पछि नेपाली फिल्मका सदाबहार अभिनेता भुवन केसीले पनि उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन् । उनले फेसबुकमा एउटा स्टाटस पोष्ट गर्दै उक्त फैसलाको स्वगत गरेका हुन् ।
Last Updated on: February 24th, 2021 at 3:37 pm